Izao vao mahalala madio | NewsMada
Par Taratra sur 18/11/2016
Samy nahatsapa ny rehetra indrindra fa ny mponina mipetraka eto an-drenivohitra fa niova endrika ny tanàna. Tsy ilay mikorontana be ireny intsony no hitan’ny maso fa tanàna milamindamina. Mihena ny fitohanan’ny fifamoivoizana, madio ny lalan-kely sy ny arabe,
Voaloko ny rindrina ao anaty tonelina, mirehitra ny ankamaroan’ny jiro, voavoatra ny simba rehetra, noesorina ka nalefa any amin’ny toerana tsy hitan’ny maso ireo mpatory an-dalana «4’mi». Miasa fatratra ny mpitandro filaminana, amin’ny tsy fandriampahalemana, ,mandamina etsy sy eroa.
Faly avokoa ny ambanilanitra fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpitondra hampandroso ny firenena. Velom-panantenana ny rehetra fa izay vao tena mandray andraikitra amin’ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina ny governemanta. Rehefa dinihina, ny fandraisana ny fivorian’ny firenena miteny ampahany na manontolo ny frantsay, afaka telo andro no mahatonga izao fikarakarana goavana izao. Mba ho fanajana ireo filoham-panjakana sy vahiny marobe ho avy. Tsy mahalala madio sy milamina izany ny mpitantana raha tsy misy vazaha sy afrikana, mitsidika eto Madagasikara. Tsy misy lanjany fa ambany noho ireo vahiny ireo ny vahoaka malagasy.
Betsaka no manahy fa raha vao lasa ireo vahiny ireo, hiverina ny savoritaka ka hivangongo indray ny fako ary hanerana ny tanàna ny fofona masiso, indrindra fa ao anatin’ny fahavokaran’ny manga sy ny letisia izao. Dia hiandry vahiny sy fivoriana lehibe indray izany vao hahalala madio.
Ao kosa nefa ny manam-pinoana fa tsy hijanona eo fa hitohy izao fandaminana efa mipetraka izao. Dia samia ho lava velona, hiaraka hahita ny tohiny eto isika mianakavy.